[OFISIALY] Mac iPhone Data Recovery: Recovery voafafa iPhone Data amin'ny Mac
World ny 1 Mac iPhone sy ny iPad angona sitrana rindrambaiko.
IPhone sitrana tahirin-kevitra ao amin'ny Mac amin'ny fomba telo.
Afaka sitrana fifandraisana, SMS, fanamarihana, antso hazo, sary, video, sns
Mifanaraka amin'ny farany iPhone sy ny Mac OS.
Andramo Tsy Free Andramo izany Free App Download
dr.fone Toolkit - iPhone tahirin-kevitra fanarenana (Mac) dia fitaovana mahery sy mahomby ho an'ny mpampiasa ny retrieve Mac very iPhone antontan-kevitra.
Voafafa tsy nahy zava-manan-danja eo amin'ny iPhone? Very na namaky ny iPhone? Tsy misy tokony hatahorana! dr.fone Toolkit (Mac), ny Mac iPhone angona sitrana manam-pahaizana, dia eto mba hanampy anao indray ny tahirin-kevitra sarobidy izay nieritreritra dia very mandrakizay.
Fa toe-javatra samy hafa
Ity tahirin-kevitra famerenana iPhone Mac rindrambaiko miasa maro iraisana tranga.
Data very indray rehefa avy orinasa
Data very noho ny iOS Vaovao farany
Device voahidy na nanadino tenimiafina
Rehetra momba ny Features
Azonao ampiasaina ity iPhone Mac angona fanarenana ny banjino very rehetra voafafa na tahirin-kevitra eo amin'ny iPhone, iPad na iPod mikasika, ka hanopy maso maimaim-poana ny antsipirihany.
Te-télécharger sy hanesorana ny iCloud nomaniny ho solon'izay rakitra? Ity antontan-kevitra iPhone fanarenana rindrambaiko ho an'ny Mac mamela anao hanao izany maimaim-poana. Andramo izany ka dia ho fantatrareo izany.
Isika rehetra dia mahafantatra fa tsy hamela Apple ny olona hamaky ny votoatin'ny nomaniny ho solon'izay ny iTunes rakitra, raha Mac io tahirin-kevitra iPhone rindrambaiko manao famerenana, ary maimaim-poana izany.
Fa mihoatra noho ny angon-drakitra sitrana Mac fitaovana iPhone. Rehefa mahita ny rakitra ao amin'ny Notarafina vokany, dia afaka hanopy maso mivantana sy pirinty ny votoaty toy izany rehefa misy mila fanampiana. Tena iray-tsindry asa.
Ity antontan-kevitra iPhone fanarenana rindrambaiko ho an'ny Mac dia manome fahafahana anao sitrana angon-drakitra toy ny fifandraisana, hafatra, sary, fanamarihana, miantso ny tantara, fampahatsiahivana, WhatsApp hafatra, sy ny maro hafa, hatramin'ny 18 rakitra karazana.
Na inona na ianao mampiasa ny farany iPhone 7, iPad Pro, na ny taloha 4 iPhone, iPad 1, ity tahirin-kevitra iPhone Mac fanarenana tanteraka rehetra mifanaraka amin'ny ohatra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Ity antontan-kevitra iPhone rindrambaiko ho an'ny fanarenana no tanteraka Mac namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
3 Mac iPhone Data Recovery Fomba
Mivantana banjino ny iPhone ity iPhone Mac angona rindrambaiko fanarenana ny mijery mialoha sy angona sitrana voafafa fahaiza-mifantina.
Exract mba hanopy maso sy fantenana sitrana izay tianao amin'ny iTunes nomaniny ho solon'izay raki-daza amin'ny Mac.
Download sy hanesorana ny iCloud nomaniny ho solon'izay rakitra ny mijery mialoha sy fantenana sitrana izay zavatra tianao avy amin'izany.
More izany Mac iPhone Software Data Recovery
Preview misy: Alohan'ny salama, dia afaka maneho sary, horonan-tsary, hafatra, fifandraisana, fanamarihana, sns
malefaka Recovery: Hita Ihany rehetra, na ny zavatra tsy ampy. Manapa-kevitra izany.
Data Back to Device: mivantana sitrana afa-tsy ny tahirin-kevitra eo amin'ny iPhone tsy overwriting efa misy tahirin-kevitra.
100% Safe Guarantee: A hamaky-Mac ihany no fitaovana iPhone angona sitrana, dia tsy mitandrina na hanova na inona na inona amin'ny iPhone.
Mora ampiasaina: Tsy misy solosaina nanontany fahaiza-manao, ny olona rehetra dia afaka mampiasa ity antontan-kevitra iPhone fanarenana rindrambaiko ho an'ny Mac.
Complete iPhone fifampifanarahana mifamadika
Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP; Mac OS X 10.11 (El Kapiteny), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, na 10.6
Ahoana no sitrana Call History amin'ny iPhone (iPhone 6s Plus / 6s Anisan'izany)
Ahoana no sitrana voafafa sary avy amin'ny iPhone (iPhone 6s Plus Anisan'izany)
Ahoana no sitrana voafafa Video amin'ny iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5c / 5 / 4s / 4
Ahoana no Retrieve Messages amin'ny iPhone WhatsApp 6s / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 / 3GS
Ahoana no sitrana Very na voafafa iPhone Contacts
Ahoana no sitrana iMessages avy amin'ny iPhone (iPhone 6s Plus Anisan'izany)